विष्फोटक पदार्थ पड्किँदा एक बालक घाइते – इन्सेक
दार्चुला ०७३ भदौ ३१ गते
शिखर गाविसमा निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजना स्थलमा फालिएको विष्फोटक पदार्थ पट्कँदा भदौ ३१ गतशिखर–१ का १० वर्षीय रोशन खडायत घाइते भएका छन् ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नहरको दुई नम्बर टनेलमा फालिएको विष्फोटक पदार्थ पड्किएको हो । बाख्रा चराउन गएका बेलामा खेल्दा उक्त विष्फोटक पदार्थ पड्किएको बालकले बताए ।
विष्फोटक पदार्थबाट बालकको दुवै हातका औंला गुमेको छ । बालकको शरीरमासमेत विष्फोटक पदार्थको छर्रा लागेको छ ।
उनीसँगै रहेका अर्का ८ वर्षीय बालक विरा खडायत भने सामान्य घाइते भएका छन् । उनको शरिरमा विष्फोटक पदार्थको छर्रा लागेको छ । पीडित बालकको शिखर स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि गोकुलेश्वर अस्पताल रिफर गरिएको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डा. रविरञ्जन शाहले बताए ।
यसअघि पनि विटुले क्षेत्रमा फालिएको माटोसँगै विष्फोटकबाट एकजना घाइते भएका थिए । निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने बेला पड्काइएको विष्फोटक पदार्थहरू अहिले देखिन थालेका छन् । त्यस बेला पड्कन नसकेका विष्फोटक पदार्थ माटोमा भेटिने गरेको हो ।
पीडित बालकका परिवारले चमेलिया जलविद्युत आयोजनासँग क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका आयोजना उपनिर्देशक पुष्पराज जोशीले भने बालकको उपचारको लागि खर्च व्यहोर्न नसकिने बताए । विद्युत निर्माण गरिरहेको चाइनिज गेजुवा गु्रपको निर्माणस्थलमा विष्फोटक पदार्थ भेटिएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने उनले बताएका छन् ।
पुरुष कैदीबन्दीको तुलनामा दैलेख कारागारका महिला कैदीबन्दीले बढी मानसिक समस्या भोगिरहेको नेपाल प्रहरी अस्पतालका चिकित्सक मनोरोग विशेषज्ञ डा.आशिष दत्तको टोलीले जानकारी दिनु भएको छ । मनोरोग विशेषज्ञ डा. दत्तको टोलीले…
प्रतिबन्धित पार्टीका इञ्चार्ज अदालत परिसरबाटै पुन : गिरफ्तार
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका कटारी नगरपालिका–४ का ३७ वर्षीय लक्ष्मण पौडेललाई प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सुनसरी जिल्ला इञ्चार्ज भएको आरोपमा फागुन १२ गते जिल्ला अदालत…